Izithelo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
I-Lychee: okuqukethwe kwekhalori, ukubunjwa, inzuzo nokulimala
Izithelo ezingavamile zifaka ukuphila kwethu. Uma ngaphambili sasinelisekile izithelo ezifakwe emathinini ("ukudlala okushisayo", "i-ananas in juice yethu", njll.), Manje kunoma yisiphi isitolo ungathenga kalula izithelo ezintsha kusuka kwenye indawo ekugcineni komhlaba. Amehlo ahlakazekayo - abonakalisa izithako zokudla ezithambile ngesiteleka esinemibala eminingi, iphunga, izinhlobo ezahlukene.
Indlela yokomisa iplamu ekhaya ukugcina izakhiwo eziwusizo
Imifino ithandwa kakhulu ekuphekeni nasekuhle empilweni. Kodwa-ke, lapho uthenga izithelo ezomile, akuqiniseki ukuthi azikho izivimbela, izibulala-zinambuzane kanye namanye amakhemikhali, futhi akuzona ezishibhile. Ngenkathi, intengo ye-plums entsha ayikho kakhulu, ngakho-ke sizobona indlela yokukhetha indlela efanele yokomisa nendlela yokugcina ukuvunwa ekhaya.
Banana: zingaki ukhalori, okuqukethwe, okuhle, ongakwazi ukudla
I-Banana ingatholakala emashalofini unyaka wonke, kuyilapho engabizi kakhulu, esiphundu futhi enempilo. Akusetshenziswanga ukudla okulula futhi njengokwengeza kuma-dessert, kodwa futhi ngezinhloso zezimonyo, ngabantu abambalwa abazi ngakho. Ake sihlolisise umkhiqizo. Ikhalori nokudla okunomsoco Kwabagijimi, ibhanana ibhekwa njengokudla okuphelele, futhi konke ngenxa yokwanda komsoco.
I-Kiwi: iyasiza noma iyingozi? Isicelo nemiphumela emzimbeni
I-Kiwi - enye yezithelo eziwusizo kakhulu eziyinkimbinkimbi, okwenzeke ukunambitha abaningi. Inomsoco ophezulu, futhi ukunambitheka kwayo okungavamile nokuqala sekutholile uhlelo lokusebenza olubanzi kumakhemikhali wokudla. Kodwa-ke, inzuzo enkulu ye-kiwi iyimpahla ewusizo, esiyichazayo kulesi sihloko.
Kuyini i-salak, izinzuzo zayo nokuthi ungayisebenzisa kanjani
Labo abanenhlanhla ngokwanele ukuvakashela iThailand okungenani uma bekwazi ukuthi ukukhethwa okuhlukahlukene kwezithelo ezimangalisayo kuleli zwe kubani abakhileyo kulo. Yimaphi amagama angabonakali njenge-durian, i-jackfruit, izithelo ze-dragon, i-maprao, i-shompu, i-guava, i-lychee, i-longan, i-mangosteen, i-no-na, i-rambutan, i-santol, i-sapodilla noma i-tamarind!